KTO-USA: November 2011
Posted by Admin Wednesday, November 30, 20110comments
American maigan hkringmang dat kasa Mrs Clinton Myen mung du
KIA ဒု စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ် ဂွမ်မော်က “မစ္စကလင်တန် အနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဖြေရှင်းဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကိုတော့ မြန်မာ အစိုးရကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြစေချင်တယ်” ဟုြေ ပာသည်။
နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ဆွေးနွေး ဟု KIO ပြော Click on++
Read more++click on (1)
Read more++click on (2)
Read more++click on (3)
Read more++click on (4)
Read more++click on (5)
တိုက်ပွဲပြင်းထန်နိုင်၍ မိုင်ဂျာယန် ဒေသတွင် စာသင်ကျောင်းများစပိတ်
Posted by Admin Monday, November 28, 20110comments
နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ် မိုင်ဂျာယန်ဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာနိုင်သည့်အတွက် စာသင်ကျောင်း ၁၀ ကျောင်းခန့်ကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့-KIO မှ ယနေ့ စပိတ်လိုက်ပြီဟု မိုင်ဂျာယန်ဒေသခံများက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဒေသရှိ ကလေးမူကြိုကျောင်းများ အပါအ၀င် မိုင်ဂျာယန်မြို့ရှိ အထက်တန်းကျောင်းနှင့် မိုခါ၊ ပရန်ခူတုန်၊ မခန်၊ ပရာဝါ၊ ၀င်းခါး၊ ဆိုင်မိုင်ပါ ရွာများမှ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းများ ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံ မိုင်ဂျာယန် အမျိုးသမီးတဦးက ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
“တိုက်ပွဲကတော့ အကြီးအကျယ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် KIO က အဲဒီကျောင်းတွေကို ပိတ်ဖို့ ပြောလိုက်တာပဲ။ ကျောင်းတွေ ကို ပိတ်ဖို့အတွက် မနေ့ညက ရွာက တာဝန်ရှိလူကြီးတွေနဲ့ အစည်းအဝေးလုပ်တာ ရှိတယ်။ KIO တွေ ပြောတာက ဒီအချီ တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင် အပြင်းအထန် ခံတိုက်မယ်လို့ ကြားတယ်။”ဟု သူမက ပြောသည်။
၎င်းဒေသတွင် တိုက်ပွဲများ အချိန်မရွေး ဖြစ်လာနိုင်သည့်အပေါ် ဒေသခံရွာသူရွာသားများကလည်း စားနပ်ရိက္ခာနှင့် အိမ်အသုံး အဆောင်ပစ္စည်း အထုပ်အပိုးများ ပြင်ဆင်ထားလျှက်ရှိသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
လက်ရှိ စပိတ်လိုက်သည့် စာသင်ကျောင်းများမှာ KIO မှ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသည့် KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှ ကျောင်းများ ဖြစ်သည်။
ယခုလ ၂၆ရက်နေ့၌ မိုးမောက်မြို့နယ်၊ ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် သျှမ်းပြည်နယ် နယ်စပ်တွင် ကချင်လွတ်မြောက် ရေးတပ်မတော်-KIA နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်အကြား တိုက်ပွဲ အပြင်းအထန် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အစိုးရဘက်မှ စစ်ရဟတ်ယာဉ်ပါ အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မိုးမောက်မြို့နယ် မိုင်ဂျာယန်ဒေသသည် KIO တပ်မဟာ(၃) ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် မြန်မာအစိုးရတပ် တပ်မ (၈၈) လက်အောက်ခံတပ်များနှင့် KIA တပ်မဟာ(၃)တပ်ဖွဲ့များ လှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
by: FB news
Dai ni na Majan shiga ( Majan wan grai grung wa nga ai Wunpawng Myutsaw share shagan niamatu akyugrai hpyi ya nga ga law)
Posted by Admin Saturday, November 26, 20110comments
Myen tsadan wa gaw simsa lam nga nna grau grau she gasat bang wa nga sai.Karai Kasangean hte hpe makawp maga la ai majaw chye ju dum ai.matut nna Myu sha ni awng padang lu u ga,yawng kyu jaja hpyi nga ga law.Nsim nsa kyu hpyi nga ga law.
Maigan myu sha ni nkau myi hte hpu nau Hkang,Mon,Myen hpung gyi,Sumlahkrung ning hkring kyaw tu ni pyi an hte Kachin hpe matsan dum myit hte naw karum ya nga ai.An hte jinghpaw wunpawng myu sha nkau myi gaw n garum ai hta n ga myusha shada byet tai nna ding bai ding na jaw nga ai.Karai waendai niamyit masa galai shai nna myu sha shada lawan zin lum lu u ga kyu hpyi ai law.Dai sadi run ai myusha byet ni Kadeamatu wa shakut nga ai kun asan sha chyena shangun ya mi ga law."He sadi run ai byet tai taw ai wa nang," Tinang sai daw sai chyen ni sum machyi jam jau,sihtum wa ai lam hpe nang mu lu nna myit pyaw ngaani?Lani myi na baw kaw dai nang kam ai Myen tsadan wa adup dumpa kau ya na dum ngaani?Karai waendai sadi run niashu mashi shumasha prat ding sa yu azi je yang ya mi ga law.
PAN SE SA LAM KAW GAP
November (27) Laban,
November (26) ya jahpawt daw hkying (7:30am) ram hta Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Ba (5) Ginra rai nga ai Namsan Yangasinna ding dung mile (2) ram tsan ai Pan Se sa lam gaw KIA myu tsaw share shagan ni hte myen asuyaahka-ma-ya (384) na hpyen hpung ni gasat lai wa sai lam na chye lu ai. N dai hta myen maga na (2) si hkrum wa sai lam hpe mung matut chye lu ai.
SHA EIT PA KAW GAP
Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaDap Ba (5) ginra rai nga ai Wu Yan sa lam Sha Eit pa kaw Ginjaw Shim Hpung na Dujum Brang Dut woi awn ai myut saw hpyen hpung ni hte myen asuya dap hka-la-ya (40), hka-ma-ya (383), (384) ni November (26) ya jahpawt daw hkying (9:25am) ram hta laja lana gap gasat ai lam na chye lu ai. N dai gasat ai hta KIA myu tsaw share shagan (3) hkrat sum nna, (4) hkala hkrum wa sai lam hte myen maga na hkrat sum ai lam hpe hkrak n chye lu shi ai.
MARU, AU RA KAW MYEN HPE HKAP GAP
Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaDap Ba (3) ginra rai nga ai Sinlum Kaba kawn Maru, Au Ra de yu wa ai myen hpyen hpung ni hpe KIA myu tsaw hpyen hpung ni November (26) ya shana de hkying (6:30pm) ten hta hkap gap ai majaw gasat poi byin wa sai lam shiga na chye lu ai.
HPUNDU KAWNG DE MYEN 10 JAN HKRAT
November (26) ya shani daw hkying (2:00pm hte (3:00pm) lapran Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaDung (1) na KIA myu tsaw share shagan ni hte mung shawa hpyen hpung (MHH) ni gaw Kaihtik makau Hpundu Kawng mayan hta myen asuya hpyen hpung ni hte gap gasat ai lam byin wa sai lam na chye lu ai. Myen maga na marai (10) jan hpe lu gap kau sai lam mung na chye lu ai.
MAM CHYANG HTE GAI HTAU KAW GAP
Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaDung (27) gin rai rai nga ai Mam Chyen hte Gai Htau maga de Dung (27) na KIA myu tsaw share shagan ni hte myen asuya hpyen dap tat-ma (99), (11) pawng hpawm dap ni hte November (26) ya jahpawt daw hkying (10:30am) ram hta laja lana gasat lai wa sai lam na chye lu ai. N dai gasat poi hta myen de na marai (20) jan si hkrum wa sai lam hpe mung na chye lu ai.
DU KABA TU JA WOI AWN HPUNG NI MYEN HTE GASAT
Wunpawng Mungdan Shanglawt AsuyaaDap Dung (15) ginra rai nga ai Mamda, Hpakawn, hte Hka Rawm kawng ni hta ZD 254 na Du Kaba Tu Ja woi awn ai KIA myu tsaw share shagan ni kawn myen tai hpyen ni hte November (26) ya shana de (5:30pm) ten hta gap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.
SHAKUM YANG KAW GASAT
November (27) Labang,
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya Dung (3) na KIA myu tsaw share shagan ni gaw Shakum Yang hkau na pa de du nga ai myen asuya tat-ma (88) hpyen hpung ni hte November (26) ya shadaw de maga hkying (3:40pm) ram hta gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai.
DUNG (36) GAP, MYEN (6) HKRAT
Noveber (27) Laban,
Sam Mung Muse maga de htu lung wa ai myen hpyen hpung ni hpe Sam Mung daju Dap Ba (4) npu, Dung (36) myu tsaw share shagan ni November (25) ya shani hkying (11:30 am) ten hta Munggu lam , Nawgu, Namsu hte Munggu Manje shara (3) hta ambush hkap gap gasat ai lam na chye lu ai. N dai zawn hkap gap gasat ai hta myen hpyen la marai (6) si nna, marai (4) hkala hkrum ma ai lam na chye lu ai. Munggu Manje makau hta hkap gap ai hta myen ni gaw shanglawt hpyen la ni hpe tam n mu jang, Kawng Kang mare maga de myawk-motar ni hte gap bang wa lam hpe mung na chye lu ai. Matut nna, Hpawng Seng lam de mung myen hpyen la ni bai htu lung wa nga ma ai lam chye buga masha ni kawn na chye lu ai.
ကေအိုင်အေ ဒုတိယအကြိမ် သိန်းစိန်နင့် တရုတ်နိုင်ငံ မှာ တွေ့မည် ။
Posted by Admin Friday, November 25, 20110comments
၂၅ ၁၁ ၂၀၁၁
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် အစိုးရသစ် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သော ကေအိုင်အေဘက်က ကိုယ်စားလှယ်များ ပထမ အကြိမ်တွေ့ ဆုံပြီး ခဲ့ပါတယ် ။
ဒုတိယအကြိမ်အားဖြင့်နောက်အပတ်တွင် အစိုးရသစ် ကိုယ်စားလှယ် များ နှင့် ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်များ ပြန်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ မှာ တွေ့ဆုံဖို့ သဘော တူထားပြီးပြီလို့ သိရပါတယ် ။
အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ် နဲ့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ လေးခုတို့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ကို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ် ။
တွေ့ဆုံမှုမှာ ကချင် KIO မှ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာလဂျာနှင့် ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးလဖိုင်လ တို့ပါဝင် တွေ့ ဆုံခဲ့ပါတယ် ။
ဒုတိယအကြိမ် တရုတ်နိုင်ငံမှာ တွေ့ ဆုံမူ မှာတော့ ဦးယွပ်ဇော်ခေါင်၊ ဦးလမိုင်ဂွမ်ဂျာ၊ ဦးအင်စန်းဆန့်အောင်နှင့် အဆိုတော် ဦးခဗျာခွန်းအောင်တို့လည်း ပါဝင်မယ်လို့ သိရပါတယ် ။
သိန်းစိန် အစိုးရကတော့ အမြန်ဆုံး အပစ်ခတ်ရပ်ဆဲမှုကို စတင် ချင်ပေမဲ့ KIO ကတော့ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆို ထားပါတယ် ။
KIO KIA ကတော့ ၁၇ နှစ်ကြာ အပစ်အခတ် ရပ်ခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံရေး
တိုးတက်မူ မရှိခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက် ရရန်
လိုအပ်တယ်လို့ ထောက်ပြထားပါတယ် ။
ဇော်ရှန် (မချမ်းဘော့)Read more click++on
ကေအိုင်အေ သဘောထားများ ဆက်လက်ဖော်ပြမည် ။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး ဆုတောင်းပွဲနှင့် ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသည့် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ ကူညီပေးရေးလှူဒါန်းပွဲကို မန္တလေးအခြေစိုက် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များက ယနေ့နေ့လယ်၂နာရီခန့်တွင် မန္တလေးမြို့ ကံတက်ကုန်း မစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပသည်။
မန္တလေး အခြေစိုက် အမရသုခ၊ နှလုံးသားဖောင်ဒေးရှင်း၊ အာရှအလင်းရောင်၊ ပီတိမိုး ကောင်းကင် စသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့ ၁၅ ဖွဲ့ခန့်မှ နယ်မြေလုံခြုံမှုမရှိသော ဒေသများရှိ ကလေးသူငယ်များသို့ ကူညီရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျင်းပကြောင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ တဦးက ပြောသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်က စစ်ပွဲတွေအတွက် မိဘမဲ့တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသားလေးတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းမယ်၊ ပြီးရင် ပရဟိ တ အဖွဲ့တွေက ငွေသား ကျပ် သိန်း ၃၀ကျော် နဲ့ အ၀တ်အစား၊ အစားအသောက်တွေလှူမယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ကံတက်ကုန်းမစိုးရိမ် ကျောင်းတိုက်ရှိ မိဘမဲ့တိုင်းရင်းသားကျောင်းသား ၂၀၀ကျော်က စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားရာ ဒေသမှ ကလေးသူငယ်များထံ စိတ်ဓာတ်အားပေးသည့် စာနှင့် ပန်းချီကားများ ပေးပို့ကြကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် မန္တလေးမြို့ခံ စာရေးဆရာများဖြစ်သည့် ဆရာညီပုလေး၊ ဆရာဆူးငှက်၊ ဆရာ ညီစေမင်းတို့လည်း ပြည်တွင်းစစ်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆိုးကျိုးများ၊ တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုချင်း ချစ်ကြည်မှုများကို ဟောပြောကြသည်။
ဆရာဆူးငှက်က“မိဘမဲ့ကျောင်းဆိုတော့ ကချင်၊ ကရင်၊ ရှမ်း လူမျိုးစုံပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ညီညွတ်ရေးအကြောင်း ဟောတာ”ဟု ပြောပြသည်။
တခြားလူမှုရေးအဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် မြင့်မြတ်ဧရာဝတီ လူမှုရေးအဖွဲ့မှလည်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက မြစ်ကြီးနားဒေသရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ပထမအကြိမ် အလှူငွေနှင့် အစားအသောက်၊ အ၀တ်အထည်များကို ဒေသရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ဘုရားကျောင်း များမှ တဆင့်လှူဒါန်းသည်။
ဘ၀အလင်း ပရဟိတနှင့် ရန်ကုန် နာရေးကူညီမှု အသင်းတို့ကလည်း မကြာမီ ကချင်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်လှူဒါန်းရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည် ဇွန်လကတည်းက အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)တို့အကြား စတင်ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲများမှာ ယနေ့အထိ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး ယခုအခါ ဆောင်းရာသီသို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်၍ အ၀တ်အထည် အသုံးအဆောင်များ လိုအပ်နေကြောင်း တရုတ် – မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့များ အဆိုအရ သိရသည်။
“ထိုးစစ်တွေ ကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေပိုများလာတယ်”ဟု တရုတ်- မြန်မာနယ်စပ် မိုင်ဂျာယန်အခြေစိုက် ဒုက္ခသည်များကို ကူညီနေ သည့် ကချင် အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင် မိုင်းဂျာ က ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားကာစက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသည့် ဒုက္ခသည် သုံးသောင်းခန့်ရှိသော်လည်း အစိုးရ စစ်တပ်များ တိုးချဲ့လာပြီး တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်လာ၍ ယခုအခါ လေးသောင်းကျော်ရှိလာရာ နေရာချထားရေးနှင့် စားဝတ် နေရေး၊ ရာသီဥတု ဒဏ်ခံနိုင်စေရန်အတွက် အနွေးထည် စသည်တို့ လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
Mani November 24, 2011 ya shani Williamsport, Pa U S AeChyeju dum poi (Thanksgiving Day) hpe ngwi pyaw awng dang ai hte galaw la lu ga ai. Lamamng tingnyang up hte laksan lakjet hpe Shd. N-Ka Zau Tawng, hkum tsup kyu hpyi hpe Slg.Latsap Hkawng Dau, chyeju shakawn sak se hkam ai lam hpe Slg. Lasham Gam Bung hte Shy. Ann, hkalum ga hpe Slg. Hpauda Tu, hpungdim kyu hpyi ai hpe Shd.Marip Zau Lum, tingse dum shapyaw ya ai hpe Shd.Gawvak Dau Ze ni shanglawm gun hpai lai wa sai hku re.Shawa yawng hku n-na, Give Thanks ngu ai mahkawn hte Htawng seng mangai ta ngu ai mahkawn ni hte Karai kasang hpe chye ju shakawn lai wa sai. A kyu hpyi ai lam hta 1. Karai kasang hpe chyeju dum shakawn ai lam 2.Buga de na padang hkrunlam majan masingamatu 3.Shawnglam majan pa na share shagan niamatu 4.Hpyen yen tsinyam niamatu 5.KIO ningbaw ningla ni, magam gun dap ma ji n-ban niamatu hte magam dap, makan dap shaguamatu akyu jawm hpyi ya ai. Bai lak san chyeju dum lakjet hta mung American Chyeju Dum Poialam labau kadun, Mungkan mungdan Ga Da ka niaChyeju Dum poi ni hte Wunpawng sha niaChyeju Dum Poialam shingdaw sawk gahkyin tang madun tsun jahpra lai wa sai. Lamang ngut ai hpang hkyen lajang da ai malu masha jawm sha rai let, myu sha lam yan hte seng ai lam ni hpe tsun jahta let, lamang hpe ngwi pyaw awngdang ai hte galaw la lu saga ai
ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များကို မွန်လူငယ် အဖွဲ့မှကူညီ
Posted by Admin Thursday, November 24, 20110comments
Anhte jinghpaw ni hpe anhte garum n sa hpyi ra ai sha shanhteatsawra
myit hte garum madi shadaw ya kam ai n dai Mon hte Hkang Myusha ni hpe
anhte kasi yu la mai nga ai,, Ti nang Myusha ni hkrap ai n sen hpe anhte na
ai zawn manang ni mung na ya nga ai majaw n gun mung lu nga ai,,
Wednesday, 23 November 2011 11:47
Written by ပိုန်အဲာ ( link click on )
ဒုက္ခသည်များကို အကူအညီပေးသွားရန် နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော
မွန်လူငယ် ဖောင်းဒေးရှင်း MYF (Mon Youth foundation) ၏ online အစည်းအဝေးတွင်
ဆုံးဖြတ် ခဲ့ပါသည်။ အကူအညီများမှာ ကချင်ဒုက္ခ သည်များ၏ လိုအပ်ချက်အပေါ်
မူတည်ပြီး ကူညီသွားမည်ဟု ဖေါင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင် မွန်လူငယ် တစ်ဦးက ယမာန်နေ့က
“ကျမတို့ကတော့ ကချင်အဖွဲ့နဲ့ ဆက်သွယ် နေပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းပြန်ချက်ကို
စောင့်နေ ပါတယ်။ သူတို့တတွေ ဘာလို နေလဲပေါ့။ ဥပမာဆိုရင် ဒီအချိန်ဟာ အေးလာ
နေပြီလေ၊ အနွေးထည်လိုလား စသဖြင့် ပေါ့နော်။ အဲဒါကို ကူညီဖို့ပါ။ တကယ်တော့
ကချင်လူထုတွေ ခံစားနေရတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ ဒဏ်ကို ကျမတို့လည်း ခံစား
ခဲ့ရဘူးတော့ သိတယ်လေ ဘယ်လောက် ခက်ခဲတယ်တာ ဒါကြောင့် ၀ိုင်းပြီး အကူအညီ ပေးဖို့
ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဗဟိုကော်မီတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ မိအိုင်စွန်းက ပြောကြား သွားပါသည်။
ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားရာမှ အစိုးရက ပြန်လည်
တိုက်ခိုက် လာသည့်အတွက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှစပြီး နှစ်ဖက်အကြား ပြင်းထန်စွာ
တိုက်ပွဲ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကချင်ဒေသခံများ သောင်းနှင့်ချီ
သောကချင်အရပ်သား ဒုက္ခသည်များ တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်နှင့် လိုင်ဇာ ကချင်ပြည်
လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ဋ္ဌာနချုပ်သို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
*ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ် ခံရသော ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များပုံ*
*ဓါတ်ပုံ - kachin-news.blogspot.com*
ဤဒုက္ခသည် များအတွက် အကူအညီမပေးရန်၊ အစိုးရမှ ပြည်တွင်း NGO အဖွဲ့များကို
တားမြစ် ပိတ်ပင်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလတွင်
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ကချင်လူမှု အဖွဲ့အစည်း များက ဒုက္ခသည် ရံပုံငွေတရပ်
ကောက်ခံကာ အကူအညီ ပေးခဲ့သော်လည်း အကူအညီမှာ လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ
ကချင် ဒုက္ခများနည်းတူ စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသော မွန်ဒုက္ခသည်
များကိုလည်း အကူအညီ ပေးသွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။
မွန်လူငယ်အဖွဲ့သည် ၂၀၁၀ ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရတို့၏ စစ်ရေးအခြေအနေ တင်းမာမှု၌ ထိုင်းမြန်မာ
နယ်စပ်သို့ မွန်ဒုက္ခသည် (၆၀၀) ကျော် ထွက်ပြေးခဲ့သည့် အချိန်တွင် လိုအပ်နေသည့်
အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ စားစရာများ၊ ကလေးများအတွက် ကျောင်းနေစရိတ်၊
ကျောင်းဝတ်စုံနှင့် အသုံးဆောင် ပစ္စည်းများ အကူအညီပေးခဲ့ပါသည်။ MYF (Mon Youth
Foundation) မွန်လူငယ်ဖေါင်းဒေးရှင်း အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတကာရောက်
မွန်လူငယ်များဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စုဖွဲ့ထားသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Admin Tuesday, November 22, 20110comments
Posted by Admin Sunday, November 20, 20110comments
နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရတက်လာတဲ့ သိန်းစိန်အစိုးရကတော့ဖြင့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဆိုတာတောင် ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူး တဲ့။ သမ္မတရဲ့ပြောပြချက်ကြောင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားသူတွေဟာ ကိုယ်ချင်းမစာ သူတွေဖြစ်သွားပါလား။ အခြေအနေ အချိန်အခါ ကြည့်ပြီးမှ လုပ်သွားမယ်တဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေလဲ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ဓားစာခံလို သဘောထားပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့အာရုံစိုက်ဖို့ ဖိအားတွေလျော့ဖို့လား။
မယ်ပြောတဲ့ သမ္မတရဲ့ဖြေရှင်းချက်က ရှေ့နောက်မညီနေပါဘူး။ သူ့ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့ မိန့်ခွန်းလဲဖြစ် သူအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ စကားလုံးလဲဖြစ်တဲ့ မတူတာတွေဘေးဖယ်ပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးစည်းပွားအတွက်ဘုံတူညီတာတွေနဲ့လုပ်ချင်တယ် တဖွဖွပြောနေပေမယ့် ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊လိုအင်ဆန္ဒတွေမတူလို့ မလုပ်ဘူးဆိုတာတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ အရင်တုန်းကတောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဘာလို့အခုကောမလုပ်နိုင်ရမှာလဲ။ တိုင်းရင်း အားလုံးရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော် လုံခြုံပြီး တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို တဖွဲ့ကိုအပစ်ရပ်ပြီး တဖွဲကို ဇွတ်တိုက်နေရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ဖို့ ကိုပြောနေတဲ့ သမ္မတက ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံ တခုဖြစ်တဲ့ Civil participation ကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့တယ်။ KSPP ကို မှတ်ပုံတင်မပေးခဲ့ဘူး။ သမ္မဖြစ်လာပြီး မတူကွဲပြားမှုကိုတွေဖယ်ပြီး တူတာတွေနဲ့ လုပ်ဆောင် သွားမယ်လို့ ပြောတုန်းက အားတက်ခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ အစိုးရသစ်ရဲ့တရားဝင်ရေးကိုသာ အသားပေးခဲ့တယ် ဆိုတာသိတာ လွန်းလှပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ မတူကွဲပြား တာဟာ NLD တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေအများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်မှုသက်သက် အတွက် အပစ်ရပ်ထားရုံမရပါဘူး။ အနှစ်၂၀နီးပါး အပစ်ရပ်ထားရုံး သက်သက်ဖြင့် စစ်မှန်သော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ မပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ယခုကဲသို့ ၉၀မတိုင်မှီ အခြေအနေပြန်ရောက်ရခြင်းကို သတိပြုရပါမယ်။
ဦးနု လက်ထက်မှသည် သမိုင်းတလျှောက် လှပတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ နှစ်သိမ့်ခဲ့တာတွေ ရပ်တန့်ပြီး အမှန်တကယ် ဖော်ဆောင်သင့်ပါပြီ။ ၉၄ အပစ်ရပ်ပြီး ကချင်ပြည်မှ ထွက်သော ကျောက်စိမ်းများမှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း များစွာ ရရှိခဲ့သော်လည်း ဖားကန့်လမ်းမှာ နိုင်ငံတော်နဲ့ အကျိုးတူ ဆိုတဲ့ ကုမ္မဏီကြီးတွေကြောင့် ပိုလို့တောင် ဆိုးတာလာကို ဒေသခံတိုင်း ညည်းညူနေကြတယ်။
အစိုးရသစ်မှ မတူကွဲပြား သူများနဲ့ နိုင်ငံတော်အကျိုး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွှက်သွားမယ်ဆိုတာ အစိုးရ တရားဝင်ရုံအတွက် ဒေါ်စု တဦးတည်းနဲ့သာတွေ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကို ချန်ထားရင်တော့ ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးရတော့မှာပေါ့...... The End..
Posted by Admin Friday, November 18, 20110comments
Posted by Admin Monday, November 14, 20110comments
‐ Asean Urged to Put Burma Abuses on Agenda
‐ KNU appoints new peace negotiation team to meet with government
‐ မြန်မာအစိုးရသစ် နှင့်တွ့ဆုံဆွေး နွေးရန်ကေအဲန်ယူ ပြင်ဆင်
‐ ကေအန်ယူက ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး မကြာခင် အစိုးရနှင့် ဆွေနေွး မည်
‐ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ KNU ပြင်ဆင်
‐ KNU ‘Peace Committee’ ready to talk peace
‐ KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီကို ဖွဲ့လိုက်ပြီ
‐ Mon State government peace team arrives at headquarters of NMSP
‐ မွန်ပြည်သစ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကုယ်ိစားလှယ်များ ဗဟိုဌာနချုပ်တွင် ဆွေးနွေး
‐ မွန်ပြည်သစ်နှင့် စေ့စပ်ရန် မွန်ခေါင်းဆောင်အချို့ကို ဝန်ကြီးချုပ်က တာဝန်ပေးစေလွှတ်
‐ ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် တွေ့
‐ ပြည်နယ် အစိုးရ ကမ်းလှမ်းချက် အပေါ် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ၏ တုန့် ပြန်ချက်
‐ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းဖုိ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း
‐ CACIUSCCCS E CM ECAာCSCMIUCSECါCSS CCCSSCAာS KIA CIUCSCIUCS
‐ ဘုရားသုံးဆူရှိ ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့များ လက်နက်ချရန် တောင်းဆိုခံရ
‐ Sino border town under curfew
‐ မြစ်ကြီးနား မိဘမဲ့ကလေးများနေအိမ် ဗုံးကွဲ၍ ၁၀ ဦးသေဆုံး
‐ မြစ်ကြီးနားတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ၍ လူ ၁၀ ဦး သေဆုံး
‐ အစိုးရတပ်က ဓာတုလက်နက်သုံးမသုံး ကေအိုင်အေ စုံစမ်းစစ်ဆေး (ကေအိုင်အေနှင့် မေးမြန်းချက်)
‐ Suu Kyi says Burma’s judicial system is not fair; prevents development
‐ “တရားဥပဒေစိုးမိုးသည့် နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားမရှိ”
‐ Suu Kyi Says End of Sanctions Depends on Govt
‐ အကျဉ်းသား ထပ်လွှတ်ရေး သမ္မတကို လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် အိပ်ဖွင့်စာပေး
‐ Burma delays prisoner amnesty
‐ ပုဂ္ဂလိက နိုင်ငံခြားငေလွဲစင်တာများ တွက်ခြေမကိုက်
‐ ကျော်သူကို ဧမာနေလွ အသင်းတော်က လူမှုအကျိုးပြု ဒေါက်တာဘွဲ့ ချီးမြှင့်
‐ Press Release: AIPMC calls on ASEAN leaders to place ethnic conflict and human rights situation in Myanmar on
Pictures: No. 1 lang na Myitkyina mare hta terreist bawm kapaw nna masha law law si hkrum let hkala hkrum ai
Posted by Admin Sunday, November 13, 20110comments
read more news+++click on+++
Posted by Admin Wednesday, November 9, 20110comments
Received: Wednesday, November 9, 2011, 6:04 PM
9-11-2011 ya shani,
Anhte Myitkyina kaw, Wunpawng Amyu Sha Mungbawng Rapdaw na slg ni hte Wunpawng Slg ni hpe
Zahkung Ting Ying (NDA-K) wa hte Lasang Awng Wah (Gwi Htu Pyi Tu Tsit) yan kaw nna daini na byin nga ai masa hte seng nna tsun sang lang dan ai lam ni galaw ma ai.
Zahkung Ting Ying hku nna,
- Myen hpe madi shadaw ra ai lam,
- Kachin ni n mai rawt malan sai lam,
- Kachin ni Myenamayam matut galaw na re lam ni tsun sang lang ai.
Lasang Awng hku nna,
- KIO/A daini galaw nga ai hpe jahpoi jahpyak ai lam galaw ai
- KIO/A hpe grai roi jahkroi nga na tsun ai
Zuphpawng kaw n-gun lu ai lam,
Sarama kaba Nhpan Ja Ra
- Anhte Shanglawt galaw ai hpe madi shadaw ra ai nga tsun ai
- Myen ni kaja wa mungmasa galaw ai rai yang madi shadaw mai tim, laiwa ai 17 ning hpe hpaji la mai ai lam ni tsun ai.
Du Wa Howa Zau Gam
- Myen hpe n mai kam ai lam
- Myen gaw sadi ndung ai, dingman ai lam n nga ai nga tsun sai
Zahkung Ting Ying hte Lasang Awng Wa yan gaw shanhte ka sa wa ai ndau laika hpe hti dan na shangut sai.
Zuphpawng nnan hpang wa ai shaloi anhte ramma nkau mi hte rai yang n-gun 84 re.
Zuphpawng hpungdim ai shaloi marai 19 hte hpungdim sai.
Sadi jaw ai lam,
- WMR Amu Madu, Sara Labang Gam Awng ( Pai / Hkra ) lawan lata la.
- MCC Ningbaw Hpung Up Sara Zung Kyang ( Karai Kasangamayam tai na kun? Zahkung Ting Ying hte Lasang Awngamayam tai na kun? )
- Zahkung Ting Ying, Lasang Awng Wa, Dr. Tu Ja ni ja ja sadi mu!
Copyright 2009 : KTO-USA: November 2011 Monezine Blogger Template Designed By Jinsona Design | Blogger XML Coded By CahayaBiru.com